पोखराबाट जापान जान ६३ जनाको लाइन, तर इन्स्टिच्युट नै नक्कली ! पोखरा र स्याङ्जाका २ जना पक्राउ – BIG FM 101.2 MHz
Home » स्थानीय » पोखराबाट जापान जान ६३ जनाको लाइन, तर इन्स्टिच्युट नै नक्कली ! पोखरा र स्याङ्जाका २ जना पक्राउ
पोखरा । जापान लैजाने भन्दै अन्तरवार्ता लिईरहेका दुई जनालाई पोखराको पृथ्वीचोकबाट पक्राउ गरिएको छ । ठगी गर्न लागेको सूचना पाएपछि कास्की प्रहरीको टोलिले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
सबैजनाले जापानी भाषा सिकिसकेका छन् । उनीहरु ५ दिनदेखि पोखरा बसेको बताउँछन् । ‘५ दिनदेखि कहिले अन्तरवार्ता कहिले के भनेर झुलाईरहे । खाँदा बस्दा २०-२५ हजार खर्च भैसक्यो, उनीहरु भन्छन्–अहिले यता न उता भैयो ।’ पीडितहरुका अनुसार मेनपावरवालाले पैसा चाहीँ उठाएका छैनन् ।